Iqela loyilo lobugcisa-iYangzhou qiangjing iimpahla zemidlalo Co, Ltd.
Ngokuchasene nemvelaphi yohlengahlengiso oluhamba kancinci lwesakhiwo seshishini lezemidlalo kunye nokwazisa okwandayo komthambo oqhelekileyo wokuzilolonga, ukumiselwa kunye nokuphunyezwa kwemigaqo-nkqubo efanelekileyo, ukuphuculwa kwemveliso yezemidlalo kuya kungenisa "elona xesha lilungileyo." Umtya wecandelo lezemidlalo uphuhliswe ngendlela ejikeleze yonke, inkqubo yentengiso ikhawulezile, kwaye indawo yentengiso yamashishini ahambelana nayo mikhulu.
Ngokonyuswa komvuzo wabahlali, ukwaziwa kwabahlali kwezemidlalo kunye nokuqina kuyaqhubeka ukwanda, kwaye iimfuno zesitayile segiya lokukhusela ezemidlalo nazo ziyanda. Uhlawulwa kakhulu ekuqeshweni kweetekhnoloji zodidi lomgangatho wehlabathi kumzi mveliso ukwenza uphawu lwakho lwe-DHS, yenye yeentengiso zemidlalo ezimbalwa ezineempembelelo zamazwe aphesheya e China; • I-YONEX, i-brand eyaziwayo yeelikethi.
Ngomzamo weqela lokuthengisa kunye neqela eliza emva kwentengiso, Amahlakani kunye neemarike: Ukongeza kwezasekhaya ngokubanzi, iimveliso zethu zokukhusela izixhobo zemidlalo zithunyelwa kwelinye ilizwe kuMntla Merika, eYurophu, kwi-Middle East nakwamanye amazwe nakwimimandla.